असार १४, २०७९ १०:०९:२०
बैशाख २७, २०७६ यमुना मगर
बैसाख २७ शुक्रबार २०७६
नमस्कार म यमुना मगर देखेको कुरा लेख्दैछु
मायाँ भन्ने शब्द नै यस्तो हुदोरहेछकी जसको कुनै अर्थ नै छैनरहेछ । अनि त्यही भित्रको याद ,याद भन्ने चिज त झनै मानिसलाई कहिल्यै निको नहुनेगरी लागेको रोग जस्तै घरीघरी बल्झिरहने ।त्यही मायाँ र यादले मान्छे अलिअलि पागल पनि बन्छन । कसैसँग कसैको अनुहार मिल्दा पनि त्यही मायाँको याद अनि उनिजस्तै देख्नेरहेछ । उहि त्यो ट्याक्सी ड्राईभर जस्तै..............
यो कुनै कल्पना गरिएको कुरा होइन यथाथर््ा लेखेको हुँ जुन कुरा मैले देखे ।
यहि बैसाख २७ गते शुक्रबार को कुरा हो लगभग १ बजेको थियो दिउसोको, म खाना खाएर आफ्नै कोठामा गुडमर्निङ मिडिया को कार्यक्रम जुन आफ्नै सहकर्मी गार्डेन राई र मेरै कार्यक्रम अन द स्र्पोट हेरेर बसिरहेकी थिएँ । कार्यक्रममा रमाईलो गेम खेलेका थियौ त्यही गेममा गार्डेनले १० रुपैया नचिनेपछि मैले भोगाएको सजाय देखेर एक्लै हासिरहेकी थिए ।
यतिकैमा गार्डेन आईपुगिन ,हामी दुबैजना कार्यक्रम हेरेर हास्यौ त्यतिकैमा म कपाल नुहाउन बाहिर निस्के नुहाईसकेर कपाल सुकाउदैथिए एउटा ट्याक्सी हाम्रो घर आगडाी रोकियो अनि ड्राईभरले मलाई हात हल्लउदै याँहा बस्छेउ ? मैले पनि जवाफ दिए हजुर म याहा बस्छु । मैले वास्ता गरीन उहाँले फेरी अलि पर ट्याक्सी रोक्दै फेरी मलाई याँहा आउन भन्दै हातले इसारा गर्नुभो । मलाई लाग्यो कोही मलाई चिन्या मान्छे हुनुपर्छ कि कतै जाने बाटो चिन्नुभएन होला ।त्यो सोचर म उँहाको नजिक पुगेर ट्याक्सीको झ्यालबाट टाउको छिराउदै सोधे दाई तपाईले के भन्नुभाको मैले बुझिन.
मोटो ज्यान, टलक्कै टल्केको सेतो दात एउटा मात्रै पहेलो देखिन्थे । पहेलो देखिने दातमा सुन हाल्नुभएको रहेछ ,
मेरो प्रश्न सुनेर अलिक डराउदै सरी बैनि मैले तिमीलाई नानु (नाम परिवर्तन) जस्तै देखेँ
मैले सोधे को नानु (नाम परिवर्तन) दाई ? उहाँले भन्नुभयो नानु हो (नाम परिवर्तन)उनी पनि यतै बस्छु भन्थिन अनि उस्तै लाग्यो तपाईको अनुहार कस्तो उसको जस्तै फेरी सरी ल
अरु बाईक ट्याक्सी ले बाटो मागिरहेको थियो । मैले भने सरी भन्नु पर्दैन दाई जानुस म यमुना मगर परे नानु (नाम परिवर्तन)होइन, अनि जिस्कदै भने भनेपछि नानु तपाईको कोही थियो हो ? उहाँले अनुहारमा अध्यारोपन ल्याउदै भन्नुभो एकछिन बैनी म यो ट्याक्सी साईड लगाएर आउँछु ल ? मलाई लाग्यो उहाँ किन फेरी आउँछु भन्या होला ? नियत केहो ? मनमा यस्तै कुरा आएको थियो । उहाँ फेरी आउनुभयो अनि भन्नुभयो बैनी अरु भए मलाई आज को नानु (नाम परिवर्तन) भन्दै थप्पड हान्थे होला तर तपाईले केही भन्नुभएन धन्यबाद आज मैले तपाईको अनुहार देखेर उनलाई मिस गरे । बास्तबमा उनी मेरो प्रेमिका थिईन तर अहिले छैन । मसँग नभएपनि उत्तिकै माया गर्छु । यि उनले दिएको यो घडी छ उनको मायाँ उहाँले घडि देखाउदै भन्नुभो र फेरी सरी बैनी म मान्छे लिन खरीबोट हिडेको ढिला भैसकेछ
उहाँ फटाफट जानुभयो ।
म सोचीरहे कत्ति धेरै मायाँ उहाँको ।
मैले उहाँको नाम सोधिन घर पनि सोधिन किन छुट्यो मायाँ त्यो पनि सोधिन । म उहाँको प्रमिका नानु (नाम परिवर्तन) जस्तै देखिएछु । अनि लाग्यो म बाहिर नबसेको भए उहाँले आफ्नो पे्रमिकालाई सम्झेर फेरी मुटु दुखाउन्नथ्यो होला । त्यसैले जसले जसलाई माया गछर्, प्रेम गर्छ नछुटिने होस अनि निस्वार्थ होस ।
सबै चाहेका कुराहरु काहाँ पाईन्छ र ?भाग्यमा लेखिएका कुरा नदेखेर पनि खोज्दै आउछन रे अनि नभएका कुरा आएर पनि भाग्छन रे त्यस्तै मायाँ पनि यस्तै हुदोहो । मायाँ गरेको मान्छे पाउनलाई पनि सायदै भाग्यमा लेखिएको हुनुपर्दो हो । सायदै उहाँको मायाँ पनि त्यस्तै भएको होला अनि त सँसार मा सबैभन्दा बढी मायाँ गरेर पनि उनी आफ्नो बन्न सकेन । नभएपनि जिन्दगीभरी मायाँ गर्छु भन्ने तपाईको त्यो मनलाई सलाम छ ।
शुक्रवार, बैशाख २७, २०७६, ०२:०५:००